Horumariyayaashu waxay ku qaylinayaan waxqabadka liita ee Galaxy Note 7 | Wararka IPhone
Soo-saareyaashu waxay ku qaylinayaan waxqabadka liita ee Galaxy Note 7
Samsung Galaxy Note 7 waa nuuca ugu dambeeyay ee dhamaadka shirkada Korea, si kastaba ha noqotee, waxay ku abuureysaa buuq weyn bulshada ugu muhiimsan ee sameeysa Android, waxaan ka hadleynaa XDA, websaydhka ugu caansan iyo halka ay ku urursan yihiin maskaxda mudnaanta ku leh mawduuca android. Waxay macno ahaan u sheegeen in «Samsung Galaxy Note 7 waxay bixisaa waxqabad dhab ah oo laga xishoodo«Waxaan ula jeedaa, in kasta oo la haysto nidaam ka sarreeya qalabka ugu awoodda badan suuqa, haddana mar labaad is-dhexgalka yar ee barnaamijka iyo taxaddarka yar ee faahfaahinta ayaa banaanka keenay ceebihii Samsung.
Aaladda kaliya laguma iibsanin iPhone 6s Plus, sidaan dhowaan aragnay, laakiin sidoo kale waxaa lala barbardhigay aalado kale oo isla laanta ah oo aan haysan qalab sidaas u awood badan, sida OnePlus 3. Waan u soconaa ku toos u qor natiijooyinka Eric Hulse, mid ka mid ah horumariyeyaasha wax ku qora XDA, si loo tirtiro sheegashooyinka suurtagalka ah ee ujeedka daabacaha:
Barnaamijyo badan ayaa dib u dhaca marka la rogrogayo, barnaamijyada oo dhami waxay had iyo jeer dib u dhacaan marka la isticmaalayo. Telefoonku aad uma kululaado, laakiin wali, markaan si isdaba joog ah u isticmaaleyno, wuxuu bilaabaa dhaqan xumo. Dib-u-dhacan dhaqdhaqaaqa ayaa sababa raaxo-darro, gaar ahaan markaan ka hadlayno qalab $ 850 ah. Intaa waxaa dheer, waa mid ka mid ah qodobada daciifka ah ee Samsung sanadihii la soo dhaafay.
Marka la barbardhigo OnePlus 3, waxaan ogaaneynaa in Note 7 uu joojinayo adeegsiga afar ka mid ah buundooyinkeeda, waana wax uusan nidaamka OnePlus 3 uusan sameynin, kaasoo isku daraya waxqabadka sideedaba si hufan. Waxaan xitaa ka heli karnaa dib udhaca animation-ka WiFi ee Galaxy Note 7. Dareemku wuxuu noqdaa calaacal.
Tani maahan oo kaliya in la furo hal cod oo lagu soo celiyo mid kale oo ka dhakhso badan aaladaha kale, barnaamijka Samsung ayaa ka gaabiya aaladaha tartamaya ficil kasta. Kiiboodhka keydku wuxuu leeyahay arrimo hangup. Lakabka TouchWiz waxay leedahay sumcad ay dhistay sannadihii la soo dhaafay.
Samsung Galaxy Note 7 wuxuu abuurayaa dood badan oo ka dhexeysa dadka isticmaala noocyada kala duwan, waxay umuuqataa in dadaalada Samsung ee ah in la qalloociyo Stock ROM-ka Android ay dhibaato ku keeneyso waxqabadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Soo-saareyaashu waxay ku qaylinayaan waxqabadka liita ee Galaxy Note 7
Lagwiz ka sokow wali wuxuu u ololeynayaa ixtiraamkiisa, isagoo si fudud farta ugu fiiqay in "cunaqabateyn" ay ka badan tahay "cunaqabateyn" marka loo eego "ceeb" waa saaxiib beenaad caadi ah! 😉
oo aan la garaneyn dijo
iyo adiga oo ka hadlaya samsung. ee ku tartamaya macruufka gaabiskiisa? taasi waa sababta ay ugu arkaan dhammaan isticmaaleyaasha tufaaxa sida zombies. sababa la mid ah kuwa ku jira boggan
Jawaab aan la garanayn
Patetico adiga ayaa noqon doona !! Aad ayaan u xiiseynayaa, waxaan ka imid Apple laakiin si aan u canbaareeyo astaan ​​waa inaan la socodsiiyaa sidaa darteed aniga ayaa i daneynaya marka markaan gaaro baarka waxaan ku qosli karaa Samsung
Gaar ahaan markii ay jiraan hordegyo bogag u heellan android raadinaya inay arkaan waxa ku dhaca macruufka. Kuweena jecel tiknoolajiyadda ayaa jecel meel kasta oo ay ka timaado, oo waxaan u maleynayaa inaanan ahayn qofka kaliya ee daneynaya waxa ay sameynayaan dhinaca kale, si aan u arko haddii maalin uun ay khalad galaan oo ay sameeyaan wax u qalma isbedelka (iyo s7 ayaa diyaar ahaa…).
Laakiin cudurada halista ah, ku xaninta  baloogyada waa talibandroid. Iguma arki doonaan blog-ka android-ka!
Hagaag, maxaad rabtaa inaan iraahdo, waxaan u arkaa wax aad looga xumaado inaan aado baar si aan ugu qoslo Samsung. Waxaad ubaahantahay inaad fadhiisato oo aad ciyaartid domino markaad aflagaadeyso garsoorayaasha.
Awoodda Samsung 🙂
Ereyga isha? Waxaan jeclaan lahaa inaan la tashado bogga halka uu ka muuqdo waxa ay ka hadlayaan.
Waxaan ahay isticmaale labadaba macruufka iyo Androidka, waana inaan idhaahdaa maqaalkani madax iyo mijo midna ma leh, macluumaad khaldan (yaan la odhan been), iswaafaq la’aan ku darsiga XDA iyo mawduuc aad u badan oo qoraagu qorayo, waan ka xumahay Laakiin taasi maahan sida aad uga hadli kartid tartanka oo aad iska dhigeyso inaad ku faaneyso inaad tahay dhexdhexaad iyo ujeedo.
Ku jawaab Manugleez96
cadaabta oo dhan oo dhan, hadii ay leeyihiin android sababtoo ah waxay leeyihiin android, haddii ay leeyihiin tufaax sababtoo ah waxay leeyihiin tufaax, sidan ayaa bani'aadamku u kala qaybsan yahay.
Ku jawaab appleyandroidfanboyja
Siri wuxuu baran doonaa sida loogu dhawaaqo Barbra Streisand bisha Sebtember 30